Uwe ọkpa / nịịka clothes Mgbasa ozi • ọkachamara na kọmpụta P&M
Pants / Shorts - ụdị maka oge ọ bụla
Uwe ọkpa / mkpirisi ha kwesiri ibu nma ma n’ile anya. Uwe dị mma iji mee ihe bụ ihe dị mkpa dị n'azụ nhọrọ nke ngwaahịa enyere. Ọnọdụ uwe ogologo ọkpa na uwe dị mkpụmkpụ anyị nwere na ụlọ ahịa ka ejiri ihe dị elu nke na-eme ka anụ ahụ na-eku ume ma gbanwee maka onye ọrụ.
Na ogologo ọkpa na-adịgide adịgide ma na-eguzogide ọgwụ na mmebi. Maka ndị chọrọ ịpụ na asọmpi ma ọ bụ hazie ogologo ọkpa anyị na-akwado igbu ihe ịchọ mma. A na-ebipụta ya na ebe ọ bụla edepụtara, dabere na mmasị ndị ahịa.
Adler nwere ogologo ọkpụrụkpụ nwere ike ịnweta akara ọ bụla
Ọkwa kachasị mma
Na ụlọ ahịa anyị ị nwere ike ịzụta uwe ogologo ọkpa ụmụ nwoke, nke ụmụ nwanyị ma ọ bụ nke ụmụaka, yana nke ụmụ nwoke na ụmụaka nke zuru ụwa ọnụ ịhọrọ n'ọtụtụ nha. Shorts na-ewu ewu n'oge opupu ihe ubi na oge ọkọchị, mgbe ọtụtụ ndị otu na ndị otu na-eme ihe omume ha n'èzí. N'aka nke ya, n'oge mgbụsị akwụkwọ, na mmalite nke afọ akwụkwọ, oge maka ịzụ obere uwe maka ụmụaka na-amalite. Enwere ike ịdebanye aha ha na ụlọ akwụkwọ ọ bụla ma ọ bụ akara kọlọb.
Anyị na-enye onye marking na ihuenyo ebi akwụkwọ ma ọ bụ ihe mkpuchi kọmputa. Anyị na-eji nlezianya kachasị mma chọọ ihe ịchọ mma, nke ga-ekwe omume maka igwe ọgbara ọhụrụ. Ekele maka nlekota oru nke nkpuchi na ọkwa ọ bụla, uwe ahụ yiri ka ọ dị mma na ọkachamara. Mbipụta na-adịgide adịgide na-eguzogide mmetụta na-adịghị mma nke ihe. Uwe na uwe dị mkpụmkpụ na-edebe agba nke onye nrụpụta yana ọdịdị mbụ. Enwere ike ịsa uwe mgbe niile, dịka ndụmọdụ ndị dị na akara ahụ - site na isoro ha, anyị nwere ike ijide n'aka iwelata ihe egwu nke mmebi.
Adler ụmụ nwoke / ụmụaka dị mkpụmkpụ, ohere nke akara ọ bụla, akara
Ekwenyere na ogbugbu uwe mgbasa ozi ọ dị oke ọnụ. Otú ọ dị, nke a abụghị eziokwu. Ekele maka ire nke akwa uwe buru ibu, anyị jisiri ike nweta ụgwọ nrụpụta dị ala. Site na nkwado nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ, yana ahụmịhe zuru oke, anyị nwere ike ịnye nkwado ntụkwasị obi na ọnụ ahịa asọmpi.
Na mgbakwunye, ndị ahịa ndị na-eme mmekọrịta na-adịgide adịgide na anyị imekọ ihe ọnụ, enwere ike inye ọnọdụ dị iche iche, nke a ga-ebute ịchekwa mmefu ego. Nhazi nke uwe ogologo ọkpa na mkpụmkpụ na-akwụ ụgwọ n'otu n'otu, dabere na mgbagwoju anya nke eserese na usoro akara.
bershkaUwe a na-acha ọchannukwu kpakpando ogologo ọkpabonprix ogologo ọkpa na-ebipụtaakwa nwahm ogologo ọkpauwe mohitoorsay ogologo ọkpaechekwara ogologo ọkpasinay ogologo ọkpaeriri afọadidas uwe ogologo ọkpaUmu nwanyi adidasUmu nwoke adidasndi uwe ojiiụmụ nwanyị na-ebu ibuụmụ nwoke ebu ibuibu ogologo ọkpauwe ogologo ọkpaanwụrụ anwụrụspodnie damskieuwe elu ụmụ nwanyị na mbipụtaSweatpantsadidas joggersụmụ nwanyị sweatpantsụmụ nwanyị sweatpants nwere mbipụtaụmụ nwoke sweatpantsụmụ nwoke na -achacha akpụkpọ ụkwụ nwere mbipụtanike ajirijaọsụsọ na-ebi akwụkwọnwoke na -echa efe efe na mbipụtasweatpants na mbipụta na alasweatpants na mbipụta na azụsweatpants site na mbipụta nke gịEjiri ebipụta akwa akwa Jeansjeansdenim jeans na eriri nwere agwọ nwere ebiputa site na nchịkọta 1975uwe ogologo ọkpa ụmụ nwokeMpempe akwụkwọ ụmụ nwoke na mbipụtacamo ogologo ọkpaụmụ nwanyị camo uwe ogologo ọkpauwe ogologo ọkpaụmụ nwanyị na-eyi uwe ogologo ọkpasut uwe ụmụakauwe ogologo ọkpa ụmụakauwe ogologo ọkpa ụmụ nwokeNike Pantsdungareesna-ebipụta dungarees na mbipụtampempe akwụkwọ ọrụ na-ebipụta yajiri akwa nke aka gị rụọ akwa yaskuulị paịlịkoNdị na-azọ ijeụmụ nwanyị na-azọ ijeuwe ogologo ọkpaụmụ nwoke na -agba egbeyiyi uwe ogologowrangler ogologo ọkpauwe ogologo ọkpa nwere oghereuwe ogologo ọkpauwe akwụkwọ na mbipụtauwe ogologo ọkpa maka ụmụ nwanyịtrouzie eji Ifuruuwe ogologo ọkpa na mbipụta maka ụmụ nwokeogologo ọkpa nwere mbipụta na alatrouzie eji IfuruZara ifuru ebipụta akpauwe ogologo ọkpa na mbipụta nke gịakwa ọkpa na-acha uhie uhiestradivarius ogologo ọkpaTchibo trousers, 7/8 n'ogologo ebipụta yawrangler ogologo ọkpazara ogologo